Ngaba siya kuyibona i-HomePod iyathengiswa ngexabiso elingaphantsi kwama-200 euros? | Ndisuka mac
Ngaba siya kuyibona iPodPod yasekhaya iyathengiswa ngexabiso elingaphantsi kwama-200 euros?
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sibone iindaba ezahlukeneyo ezinxulumene nePod yasekhaya. Phambi kokupapashwa kweziphumo zekota, kwavakaliswa ukuba ukuthengiswa kweKhayaPod kwakusezantsi kunokuba bekulindelwe yi-Apple kwaye kwangaphambili iivenkile ezibonakalayo zika-Apple zinciphise iiodolo.
Kwangelo xesha, kukho amarhe okuba ugqithise. Nokuba kunganjani na, ukhuphiswano luka-Apple kwizithethi lunodidi olunye lwesithethi. Amanqaku afana ne-Sonos anesithethi sokuvelisa malunga ne- $ 200. Mhlawumbi iApple kufuneka icinge ngokuthatha isithethi kolu luhlu, ukuba ifuna ukubakho kakuhle kolu shishino.
Kumzuzwana sigcwele amarhe, kwiintsuku ezimbalwa emva kweWWDC ka-Apple, apho kungaqhelekanga ukubonisa isoftware, kodwa ngaphandle konyaka ophelileyo, baye bazisa iindaba. Omnye umzuzu apho iApple iveza iindaba ezibalulekileyo yingcaciso ephambili kaSeptemba, apho igcwalisa i-iPhone entsha ngokuhambelana. Ngokwenene, okwangoku, konke esinako ziingxelo ezinolwazi oluncinci, ke ngoko asinakukuqinisekisa okanye siphike naluphi na ulwazi.
Ukuba sithelekisa iPod yasekhaya kunye nezithethi ezikrelekrele, uluhlu lwezithethi luhamba ukusuka kwi- € 50 ukuya kwi- € 230, ukuba sijonga uluhlu lwezithethi zohlobo lwe-Echo. Esi iya kuba sesinye sezizathu zokuzisa isithethi se- € 200 kwintengiso.
Ukuba isithethi esinexabiso eliphantsi siyakhululwa, akucaci nokuba kuya kuba nophawu luka-Apple okanye endaweni yoko uphawu lwe-Beats. Ngokuqinisekileyo, esi sithethi sitsha siya kuba ne-AirPlay 2, kodwa ayizukufumana uSiri.
Nangona iApple inokucinga ngesithethi se- € 200 okanye endaweni echaseneyo, isithethi esikumgangatho ongcono kunePod yasekhaya. Abo bacinga ngolu hlobo, bacinga ukuba umyinge wexabiso / umgangatho weKhayaPod ulungile, kwaye ke, banokwenza isithethi somgangatho ophakamileyo, ngexabiso elinokhuphiswano kakhulu.
Nokuba yeyiphi na indlela, kujongeka ngathi abafana baseCupertino bacinga ngento, esiza kubona kwangaphambili ukuwa okulandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba siya kuyibona iPodPod yasekhaya iyathengiswa ngexabiso elingaphantsi kwama-200 euros?
I-OPUS: I-Rocket ye-Whispers, umdlalo owenza ukuba abasebenzisi beMac bonwabe
Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu ze desktop kwiMacOS